Tsiry mpanentana mikorontana : manatona dokotera raha…
Mety hiaina fikorontanan’ny tsiry mpanentana ny vehivavy. Rehefa milamina anefa ny toe-batana sy ny saina dia tokony hiverina ho ara-dalàna izany. Raha tsy izay dia aleo manatona dokotera.
Tsy tena ahitana antony manokana ny mahatonga ny fikorontanan’ny tsiry mpanentana eo amin’ny vehivavy, indrindra raha tsy toe-batana. Na izany aza anefa, misy tranga iainan’ny vatana, mety ho isan’ny manosika azy : ny vohoka, ny fidirana amin’ny fitsaham-pitsaihana, ny fitsaham-pitsaihana, ny rarin-tsaina, ny fidirana amin’ny fotoana maha-maoty sns. Mety misy hidiran’ny tarazo ihany koa anefa ny fikorontanan’ny tsiry mpanentana, na, raha lasa lavitra, dia homamiadana.
Maro ny soritra hamantarana fa mikorontana ny tsiry mpanentan’ny vehivavy iray :
· Fidinan’ny filàna, fahamainan’ny fivaviana,
· Mirongatra na tsy maniry firy ny volo,
· Harerahana, rarin-tsaina, fahakizintinana
· Hoditra maina sy makina,
· Volo miha-manify tampoka,
· Hoho mora tapaka,
· Fitohanana na olana amin’ny taovam-pandevonan-kanina,
· Tsy fahitana torimaso,
· Fahatsapàna hatsiaka tampoka sy matetika, hatsembohana tafahoatra,
· Fihenan’ny lanja na fitomboan’ny lanja tampoka,
Aleo manatona dokotera
Raha tsikaritra ho mitambatambatra ireo soritra ireo dia aleo manatona dokotera. Tsy tokony atahorana loatra ny fikorontanan’ny tsiry mpanentana raha tsy hoe : manohintohina ny fipetrahan’ny zaza, ny diabeta, ny hatavezana tafahoatra, ny mony mirongatra be.
Mifototra amin’ny fomba fiaina ny fisorohana ny fikorontanan’ny tsiry mpanentana : sakafo ara-pahasalamana, fampiasam-batana, rarin-tsaina, fandanjalanjana ny zavatra atao sy hanina, tsy mifoka sigara, tsy misotro toaka.